सडक दुर्घटनामा परी पर्वतका गिरीको मृत्यु — donnews.com
१दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु
२हर्बल हब बन्दै म्याग्दीको दुर्गम स्थान गुर्जा
३एमाले केन्दीय पदाधिकारी र सदस्यको सङ्ख्या थप हुने
४स्याङ्जाको सभापतिमा थापा विजयी
५मोडलिङ क्षेत्रमा रमाउँदै सन्तोष, ‘नयाँ साथी’ भिडियो सार्वजनिक
६चिउरी, पैयूँ र दुदिलो नासिँदै जाँदा मौरीलाई चरन क्षेत्रको अभाव
७‘मूल मुद्दाहरुमा समान धारणा बनाउन संवाद र सहकार्य आवश्यक’: प्रधानमन्त्री देउवा
८बालुवा खानीमा पुरिएर दुई महिलाको मृत्यु
९‘देश बनाउन एमालेको एकल बहुमत आवश्यक’ : अध्यक्ष ओली
१०थप ३०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३ को मृत्यु
११टी-२० विश्वकप छनोट- कुवेतमाथि सहज जित हात पार्दै नेपाल शीर्ष स्थानमा
१२एमाले सचिवमा उम्मेदवारी दिने शेरधन राईको घोषणा
११राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार पूजाअर्चनाको क्रममा मुक्तिनाथ मन्दिरमा
१२विश्वकपमा पाकिस्तानको लगातार तेस्रो जित, अफगानिस्तान ५ विकेटले पराजित
सडक दुर्घटनामा परी पर्वतका गिरीको मृत्यु
'सराङकोटबाट पोखरा आउँदै गरेको मोटरसाईकल सडकबाट ५० मिटर तल खसेको थियो'
पोखरा । आफैंले चलाएको मोटरसाईकल अनियन्त्रित भई सडकबाट ५० मिटर तल खस्दा चालकको मृत्यु र पछाडि सवार व्यक्ति घाईते भएका छन् । दुर्घटनामा परी घाईते भएका मध्ये ३२ वर्षका मोटरसाईकल चालक माधव गिरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । आज दिउँसो १ बजे पोखरा वडा नं. २ स्थित पोखरा–सराङकोट सडकखण्डस्थित गुम्बा नजिक सराङकोटबाट पोखरा आउँदै गरेको मोटरसाईकल सडकबाट ५० मिटर तल खसेको थियो ।
ग १८ प ४८१४ नम्बरको मोटरसाईकल आफैं अनियन्त्रित हुँदा मोटरसाईकल चालक पर्वत कुस्मा नगरपालिका वडा नं. ७ चुवा बस्ने वर्ष ३२ का गिरीको उपचारका क्रममा सहारा अस्पताल पोखरामा मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ । मोटरसाईकलको पछाडी बस्ने सोही ठाउँका ३२ वर्षीय गोविन्द गिरीको फिस्टेल अस्पताल पोखरामा उपचार भईरहेको छ । उनको अवस्था मध्यम खालको रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।